Midowga Afrika oo Cambareeyay Ciidamadii Burundi ee Lagu Dilay Deg Balcad – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Midowga Afrika ayaa si kulul u cambaareyay weerarkii lagu bartilmaameedsaday askar katirsan ciidamada Burundi oo qeybta ah howlgalka nabad ilaalinta amisom ee Somalia askartan oo lagu dilay weerar ka dhacay gobalka shabeellaha dhexe oo katirsan maamulka hirshabeelle.
Qoraal kasoo baxay ururka ayaa lagu cambaareeyay weerarkii lagu dilay askar ka tirsan ciidamada Burundi oo qeybta ka ah ciidamada nabad ilaalinta ujooga Somalia inkastoo amisom aysan bixin faah faahin dheeraad ah oo la xariirta khasaaraha dhabta ah ee gaaray ciidamadda Burundi oo lagu weeraray qeybo kamid ah Gobalka Shabeellaha dhexe.
Moussa faki mahamat Madaxa Ururka Midowga Afrika ayaa si kulul u cambaareeyay askartii ciidamada Burundi ee lagu dilay weerar kadhacay wadada xiriirisa muqdisho iyo jowhar oo ey marayeen kolonyo ey wateen ciidmada Burundi oo qeyb ka ah ciidmada nabad ilaalinta amisom ee Somalia.
Maoussa faki mahamet waxa uu utacsiyadeeyay qoysaskii ey kageeriyoodeen askarti Burundi iyo sidoo dowlada dalka Burundi,waxa uuna caafimaad urajeeyay askarti Burundi ee kudhaawacantay dagaalkii kadhacay wadada xiriirisa jowhar iyo muqdisho,mahamet waxa uu hoosta kaxariiqay in Ururka ay ka go’an tahay sidii ey ulashaqeen lahaayeen dowlada federaalka Somalia .
Isbuuci udanbeeyay kuxigeenka hogaanka ciidamada amisom ganeraal Nakibus lakara ayaa booqday magalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle halkaasi oo ay ku suganyihiin ciidamadda Burundi oo qeybta ka ah howlagalka nabad ilalinta amisom ee Somalia ujeedka booqashada general Nakibus lakara ayaa ahaa qiimeen ku aadan sida ey usocdaan howlgallada ciidamada Burundi ey kawadaan ciidmada Burundi.